कार्यकर्ता – Himalaya Television
नेताको अशोभनीय माला मोह, कार्यकर्ताकाे चाकडी चरित्र (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । नेपालमा नेताको घाँटीमा मालाको भारी नै झुन्डाइदिएर चाकडी गर्ने प्रचलन निकै बढेको छ । पछिल्लो समय यो एउटा विकृत संस्कारकै रुपमा विकसित हुँदैछ । यस्तै विकृत चाकडी मोह गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमा पनि देखियो ।...
एमाले वडा अधिवेशनः आम कार्यकर्तामा छैन उत्साह (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अधिवेशनमा जुटेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको एमालेले कात्तिकको पहिलो साता देशभरका वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ । आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन...
१९ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले कार्यकर्तामा अपूर्व उत्साह र ऊर्जा थपेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ र नुवाकोटका वडा तथा पालिका अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यको सम्मानमा आज...
एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डले दिए निर्देशन (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ असोज २०७८ काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेता, कार्यकर्तालाई जाली, फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरुको प्रतिवाद...
चुनाव कसरी जित्ने ? प्रचण्डले के भन्नुभयाे कार्यकर्तालाई ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१० असोज २०७८ काठमाडौं । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको हरेक भाषणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न थालिएको छ । हालैको अभिव्यक्तिमार्फत उहाँ आफैंले धेरै ‘पोलहरू’ खोल्नुभएको छ । प्रचण्ड विगतमा आफूले गरेका गर्न हुने या नहुने...
१४औं महाधिवेशनमा सफल पार्न कार्यकर्तालाई सभापति देउवाको आग्रह
१८ भदौ २०७८ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा सक्रियरुपमा सहभागी हुन सबै कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकमा आग्रह गर्नु भएको छ । १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजदेखि शुरु हुन लागेको वडा अधिवेशनको सन्दर्भमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति...
कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई प्रश्न – अब आउने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
११ भदौ २०७८ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । सभापतिको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले काठमाडौको बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय नै खोल्नु भएको छ । सम्पर्क कार्यलयको उद्घाटमा सहभागी भएका कांग्रेसका नेता,कार्यकर्तालाई हामीले...
शालिनता सिकाउने ओलीका कार्यकर्ताको सडकमा यस्तो अमर्यादित तमासा (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ साउन २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेको विरोधमा युवा संघ नेपालका कार्यकर्ताले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरुले बाँदरजस्तो मुकुण्डो लगाएर नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले वरिष्ठ नेता माधवकुमार...
एमाले कार्यकर्ताले कोटेश्वरमै जलाए माधव नेपालको पुत्ला (भिडियो रिपोर्टसहित)
४ साउन २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षका कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि आक्रोशित भएका कार्यकर्ताले नेपालको पुत्लादहनदेखि विरोधमा चर्का नारावाजी गरेका छन् । यो नेकपा एमालेका वरिष्ठ...